Al-Shabaab waxaa muhiim u ah faa’iidada ay dhaca ka helaan
Ururka xag-jirka ah ee al-Shabaab wuxuu sannad walba malaayiin doolar ka bililiqeystaa baayac-mushtartka Soomaaliyeeed ee ka shaqeystaan beecsharooyinka xalaasha ah ee dhammaan dalka Soomaaliya.
Baabuurta xamuulka ah ee sita badeecooyinka sida aadka ah looga bahan yahay goobaha ay abaarooyinka saameeyeen waxay maalin walba la kulmaan dhac ama canshuur aan macquul aheyn. Xubnihii hore ee al-Shabaab waxay sheegeen in lacagaha laga uruuriyo baaburta xamuulka iyo baabuurta kale ee rakaabka ee waddooyinka ugu waaweyn uu ururka ka helo ka helo kumannaan doolar maalin walbo. Qarammada Midoobay waxay sheegtay in hal isbaaro keliya oo ku taallo waddo weyn uu ururka ka helo 5000 oo doolar hashii maalinba.
Waxaa murug leh in badeecooyinka sida xad-dhaafka ah loo bililiqeysanayo ama la canshuurayo ay dhalineyso sicir-barar taasoo ay dhib ku tahay dadweynaha masaakiinta ah ee ay waxyeelleeyeen abaaraha iyo daadadka. Waddooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobalka Shabeellada iyaguna waxaa la sheegay inay ka jiraan canshuurta sharci-darrada ah balse haatan waxaa arrintaas ka hortageen ciidammada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo ay goobahaas ka wadaan howl-gallo ka dhan ah ururka dhaca caadiyeystay ee al-Shabaab.
Ururka nolol iyo nabad-diidka ah ee al-Shabaab isaga waxaa muhiim u ah oo keliya faa’iidada uu ka helo dhaca uu dadka u geysto, diintana muhiim uma ahan.
Dhacdooyinka ka hor-tagga al-Shabaab oo aad u bateen
Ururka dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa lagu yaqaannaa inay si khasab ah ummadda Soomaaliyeed ee saboolka ah uga qaataan lacagahooda iyo xoolahooda. Ururka wuxuu si caadi ah u bililiqeystaa xoolaha iyo dukaammada ay leeyihiin dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka faro-ku-tiriska ah ee uu weli ka arrimiyo.
Dhacdooyinka xaq-darrada ah waxay ku khasbeen dadweynaha inay ka hortagaan xeerarka adage e ururku caadiyeystay waxayna go’aansadeen inay iska celiyaan sida sharci-darrada ah ee ururku doonayo inuu u kobciyo dhaqaalahiisa.Iska hor imaadyada u dhaxeeya dadweynaha xoola-dhaqatada ah iyo ururka ayaa waayahan dambe sare u kaceen.
Labo asbuuc hadda ka hor, dadweynaha ku dhaqan tuulada Buq-Goosaar ee u dhow magalada Beledweyne ee gobalka Hiiraan waxay dagaallo ku qaadeen ururka al-Shabaab iyagoo kasoo horjeedaan canshuurta xad-dhaafka ah ee sida xaq-darrada ah dadka looga uruurinayo halkaasoo ay ku dileen shan xubnood oo ka tirsanaa ururkaas. Sidoo kale dagaallo kuwaas la mid ah waxay ka dhaceen magaalada Maxaas ee gobalka Hiiraan kaddib markii ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab isu dayay inuu canshuur ka uruuriyo xoola-dhaqatada.
Daahir Muuse Cosoble, oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladaas wuxuu sheegay in dadweynaha xoola-dhaqatada ah oo kaashanayaan ciidammada dowladda Soomaaliyeed ay dagaal socday lix saacadood ku qaadeen ururka al-Shabaab.Sarkaallada dowladda eek u sugan magaalada Maxaas waxay xaqiijiyeen in dagaalladaasi dhaceen iyagoo sheegay in dowladdu caawisay dadweynahaas.
“Xoola-dhaqatada iyo dadweynaha ku dhaqan tuulooyinkaan, kuwaasoo iyaguba haystaan dhibaatooyin dhaqaale, oo xoolahoodii ku dhammaadeen abaartii dhawaan ka dhacday dalka, waxay diideen in la canshuuro taasoo dhalisay in dagaal uu halkaas ka bilowdo. Maaddaama aan dowladda wakiil u nahayna, waxaan ku khasbannahay inaan dadweyneheenna ka celinno argaggixisada al-Shabaab,” ayuu yiri mid ka mid ah sarkaallada dowladda. Dad badan oo ku dhaqan halkaas ayaa sheegeen in 12 ka tirsanaayeen ururka xukunka qalloocan ee al-Shabaab lagu dilay dagaalkaas.
Nin ka tirsanaa Shabaab oo xabsi daa’in lagu xukumay
Nin ka mid ahaa ururka dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab, kaasoo la aaminsan yahay inuu aqoon u leeyahay habka loo sammeeyo walxaha qarxa, ayaa lagu xukumay xabsi daa’in iyadoo labo kaloo ka mid ahaayeen ururkaas lagu xukumay 10 sanoo xarig ah kaddib markii la xaqiijiyay in saddexdaas ka mid ahaayeen ururkaas nabad-diidka ah.
Maxkamad ayaa ku xukuntay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud xabsi daa’in halka Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weeraar lagu xukumay 10 sanoo xarig ah kaddib markii si toos ah loo xaqiijyay inay ka mid ahaayeen ururka al-Shabaab.
Xasan Cali Shute, oo ah garsooraha kiiska ayaa sheegay in Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud lagu caddeeyay inuu ahaa madaxa koox u qaabilsan sameeynta walxaha qarxa.
Sida ay sheegayaan qorallada maxkamadda, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud – kasoo lagu xukumay xabsi daa’in – wuxuu tababbarro ku aaddan habka loo sameeyo walxaha qarxa siiyay Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weerar.
“Kaddib markii aan dib u eegnay caddeymada kiiska, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud waxaa lag
u xukumayaa xabsi daa’in, halka Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weerar kuwaasoo uu tababbaray eedeysanaha koobaad waxaa lagu xukumayaa 10 sanoo xarig ah,” ayuu xukumay garsooraha.
Saddexdaan nin waxaa qabteen sarkaallada amniga dalka Soomaaliya bilowgii bishaan xilli ay dhulka galinayeen walxaha qarxa. Ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab wuxuu door-biday inuu qaraxyo u geysto ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin ee ku dhaqan magaalada Muqdisho maaddaama laga saaray dhammaan magaalooyinka waaweyn oo ayna soo wajaheen xaalado adag dhanka dhaqaalaha.